संघीय सरकारबाट सुदूरपश्चिमका कुन पालिकालाई कति बजेट ? (सूचीसहित) - नागरिक रैबार
संघीय सरकारबाट सुदूरपश्चिमका कुन पालिकालाई कति बजेट ? (सूचीसहित)
धनगढीः संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकालाई अनुदान दिने भएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपमहानगरपालिका ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संघिय सरकाबाट अनुदानका रुपमा पाउने भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले ८८ करोड ३५ लाख अनुदान पाएको थियो। यस्तै प्रदेशका ८८ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम भने बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाले अनुदान पाउने छ। सुर्माका लागि संघीय सरकारले १८ करोड अनुदान विनियोजन गरेको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ४ खर्ब रुपैयाँ २९ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले सघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ।